Umyalo weScratchpad: Indlela esheshayo yokuFinyelela nokuvuselela i-Salesforce kunoma iyiphi i-Web App | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 2, i-2021 NgoLwesine, July 22, 2021 Douglas Karr
Abaphathi be-akhawunti cishe kuzo zonke izinhlangano zokuthengisa bagcwele amathuluzi amaningi kakhulu okuthengisa anikezwe amandla kusuka kwababo CRM. Lokhu kuphoqa abathengisi ukuthi basebenze isikhathi esiningi futhi sikhathale isikhathi sokuhamba uzulazula phakathi kwamathuluzi, ukuphatha inqwaba yamathebhu wesiphequluli, ukuchofoza okuyisidina, nokukopisha nokunamathisela okuyisidina, konke ngenkathi ngasikhathi sinye bezama ukuvuselela i-Salesforce. Ngenxa yalokhu, kuncipha ekusebenzeni kwansuku zonke, ukukhiqiza, futhi, ekugcineni, nesikhathi sabathengisi ukwenza imisebenzi yabo-ukuthengisa.
Umyalo weScratchpad yethule, ivula indlela esheshayo yokuthi abathengisi bafinyelele futhi bavuselele amanothi wabo wokuthengisa, imisebenzi, ne-Salesforce, kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza lwewebhu noma umphakathi wokuthengisa - mahhala.
Ngemuva kokukhuluma ngqo nezinkulungwane zabaphathi be-akhawunti ezivela ezinhlanganweni zokuthengisa zabo bonke osayizi, sifunde ukuthi basebenzisa okungaphezulu kwengxenye yesikhathi sabo ukuvuselela i-Salesforce esikhundleni sokuthengisa. Abaphathi be-akhawunti bamane bafuna ukuvuselela i-Salesforce ngokushesha ngaphandle kokushintsha umongo nokwephula ukuhamba kwabo komsebenzi, ukuze babe nezingxoxo eziningi namakhasimende futhi bavale amadili amaningi. IScratchpad Command inika amandla wonke umsebenzisi weSalesforce eMhlabeni ukwenza izibuyekezo ezidingekayo abazidingayo, kunoma iyiphi iwebhusayithi, ngaphandle kokushintsha amathebhu, mahhala. Kuyashesha. Kulula. Futhi kuyathandeka ukuyisebenzisa.
UPouyan Salehi, umsunguli kanye ne-CEO yeScratchpad
Nge-Scratchpad Command, ngokuchofoza okukodwa, abasebenzisi bangakha oxhumana naye omusha, i-akhawunti, ithuba, umsebenzi, noma umsebenzi futhi benze izibuyekezo kunoma iyiphi inkambu yangokwezifiso noma into ku-Salesforce. Abaphathi be-akhawunti bangakha, bavuselele futhi bavumelanise amanothi wedili abalulekile kusuka noma yikuphi, kususwe isidingo sokungena ngemvume ku-Salesforce ngqo, ukubhampa phakathi kwamanye amathuluzi okuthengisa, noma ukuthwalwa ngokukopisha nokunamathisela kusuka kwesinye isicelo kuye kwesinye.
IScratchpad Command nayo ingasetshenziswa lapho abaphathi be-akhawunti behlanganyela emiphakathini yokuthengisa, ibasize babuyekeze i-Salesforce ngenkathi bexhumana nontanga yabo kanye nozakwabo noma yikuphi ku-intanethi. Ngokwengeziwe, abaholi bezentengiso bayazuza ekufinyeleleni okusheshayo kwedatha ebuyekeziwe ye-Salesforce ngenkathi besebenza ngaphakathi kwamathuluzi wabo wokubikezela abawathandayo nezinhlelo ze-BI, noma amadeshibhodi amibiko wangaphakathi owakhelwe ngaphakathi.
Amakhasimende angafaka iScratchpad njengefayela le- I-plug-in ye-Chrome, xhuma ku-Salesforce bese wenza izibuyekezo emapayipini abo ngemizuzwana engama-30 noma ngaphansi. IScratchpad ixhuma ngokushesha ku-Salesforce futhi inikeze abathengisi isikhombimsebenzisi esisheshayo nesesimanje sokuxhumana nedatha yabo yokuthengisa nokugeleza komsebenzi. ISalesforce ihlala iyi-database yerekhodi, kuyilapho iScratchpad isebenza njengendawo yokuzibandakanya ethokozelwa amaqembu ezimali.
Uma kukhulunywa ngabamele abathengisi, akukho lutho oluzwakala luthembekile ngaphezu kwebinzana isikhathi yisimali. Futhi lapho leso sikhathi (nemali) sinqunywa phakathi ngenxa yokungasebenzi kahle okubangelwa wonke amathuluzi nezinhlelo zokusebenza okufanele zenze imisebenzi yazo ibe ngcono, akuyona inkinga kumuntu othengisayo kuphela kodwa entweni engezansi yenhlangano . IScratchpad Command inika amandla abaphathi be-akhawunti ukuphatha ngokuphumelelayo nangokuphumelelayo amapayipi abo ngesikhala sabo sokusebenzelana esisebenziseka kalula, ukuze bakwazi ukubuyela ekuvaleni amadili amaningi nokwenza umthelela omkhulu ebhizinisini.
UNancy Nardin, uMsunguli, Amathuluzi Okuthengisa Okuhlakaniphile
IScratchpad Command isiyatholakala kubasebenzisi be-freemium nabakhokhelwayo.
Isikhala sokusebenzela esihlanganisiwe seScratchpad
IScratchpad inikeza indawo yokusebenza ebumbene phakathi kwekhalenda, amanothi wokuthengisa, kanye ne-Salesforce. Ngokokuqala ngqa, noma yimuphi umphathi we-akhawunti, omele ukuthuthukiswa kwezentengiso (i-SDR), noma umphathi wezentengiso osebenzisa iSalesforce angafinyelela futhi adale amanothi, engeze futhi acebise oxhumana nabo abasha, futhi adale futhi aphathe imisebenzi ngqo kusuka kukhalenda labo.
Ikhalenda, izinhlelo zokusebenza ezithatha amanothi, imisebenzi, kanye ne-Salesforce ziyingxenye ebalulekile yosuku lwabo bonke abathengisi, kepha kunqanyulwe ngokuphelele komunye nomunye futhi akulingani nokuhamba komsebenzi komthengisi. Isikhathi eside kakhulu, ochwepheshe bezentengiso kuyo yonke inhlangano baqoqe ndawonye izinhlelo zokusebenza ezingahleliwe ukudala indawo yabo yokusebenzela yokuthengisa. Lawa ma-hacks enziwe ngesidingo emzamweni wokuhlala ehlelekile, ukuphatha imihlangano, ukuvuselela nokwabelana ngamanothi okuthengisa, ukulandela izinyathelo ezilandelayo, ukusetha imisebenzi, ukuqinisekisa ukuhanjiswa okungenamthungo, nokusebenzisana kulo lonke iqembu lezimali.
Ngenxa yalokho, lezi zindawo zokusebenza zidinga ukuphathwa kwedatha okuyisidina futhi ngesandla, okuphoqa abathengisi ukuthi basebenzise isikhathi esingenakulinganiswa ekufakweni kwedatha kunokuthengisa kumakhasimende. Eqinisweni, umbiko ovela kwaSalesforce uveze ukuthi ochwepheshe bezentengiselwano banamuhla basebenzisa kuphela amaphesenti angama-34 esikhathi sabo ukuthengisa. Amaqembu e-RevOps ne-SalesOps aqhubeka nokukhungatheka njengoba lezi zinhlelo ezigencwe ndawonye zingaxhunyiwe kumthombo weqiniso ledatha-iSalesforce.
Ulwazi olubanzi Engeza ku-Chrome
Tags: i-plugin ye-chromei-Google Chromei-plugin ye-google chromeUNancy nardinUPouyan Salehpouyan salehisalesforceisikriphediumyalo we-scratchpadamathuluzi wokuthengisa ahlakaniphile